I-China Khulisa iTente ye-Indoor Garden Plant Umgangatho oPhakamileyo 120*120*200 CM umzi-mveliso kunye nababoneleli | Virex
I-VIREX Grow Tent yenziwe kwi-600D Oxford kwaye ifakwe ngesilivere ye-PET mylar enezinga elibonisayo elingaphezulu kwe-95%. Impahla yentente enzima, intsimbi emhlophe egqunywe ngentsimbi, umsebenzi omnyama onzima we-ABS odibeneyo, ukhuselekile kwaye uzinzile.
Uyilo locango olumilise ngo-D, iziphu yerabha ephindwe kabini eyomeleleyo. Iifestile ezininzi ezingamawele zingasetyenziselwa ukuhlalisa izihluzi kunye neefeni. Izihluzi ezimhlophe zenzelwe ukunceda ukujikeleza umoya kunye nokugcina ezinye izidalwa ngaphandle kwentente ekhulayo.
I-VIREX yokutyala Izixhobo zentente zibandakanya: intambo yokuphakamisa, i-tray yomgangatho okhutshweyo wamanzi kunye nemiyalelo yokufakela.
Intente yokutyala iVIREX inokwenziwa ngokwezifiso ngobukhulu, umbala, ifestile yokujonga, uphawu, ibhokisi yezixhobo kunye nokunye. Ukubonelela ngenkonzo emva kokuthengisa kwiintente zokutyala i-VIREX. Xa ufumana naziphi na iingxaki, nceda uqhagamshelane neqela lethu lenkonzo emva kokuthengisa ngenkxaso yethu.
1.Izinto eziphathekayo: 600D Oxford composite lychee grain aluminiyam film (600D ubukhulu 0.35mm)
2.Umbhobho wentsimbi: Intsimbi ecatyiswe emhlophe TUBE D16 * 0.6mm (umbala unokwenziwa ngokwezifiso)
3.Ufakelo: Itiyi ye-ABS emnyama emnyama/izifakelo zentsimbi
4.Umphetho wokusonga: Umphetho oluhlaza wokusonga (isikozed umbala)
5.Ubungakanani bomngxuma wokungenisa umoya: 4/6/8/10 intshi
6.Ubungakanani befestile yokucoca: 45 * 13.5cm isikrini esimhlophe sefestile yefestile
7.Itreyi yamanzi: isiziba esimnyama esinamacala amabini silungisiwe
8.Umtya wokutsala umoya wokungenisa umoya: umtya wePP omnyama
9.I-zipper: Ubungakanani obumnyama be-10 zipper
5. Kugqwesileyo ukuthenwa kweentyatyambo.
6. Isikere sokucheba ubunzima obukhanyayo.
Igama lemveliso VIREX 120 * 120 * 200 Khulisa intente
2.Siyayamkela iodolo encinci.
3.Sinikezela ngenkqubo yenkonzo emva kokuthengisa.
4.Yonke imveliso yethu iya kuvavanya ngononophelo lisebe lethu le-QC ukuqinisekisa ukuba umgangatho okwinqanaba eliphezulu.
Q1:Ngaba ungayenza ilogo, ukupakishwa kunye noyilo lweemveliso zakho?
Q2:Indlela yokuqinisekisa umgangatho?
Q3:Ithini imiqathango yakho yokuhlawula?
Ngaphambili: I-Spectrum egcweleyo ye-LED Ukukhanya okuPhakamileyo okuPhakamileyo koLawulo oluBukrelekrele kuYilo lokuKhula kokukhanya kwe-LED
Okulandelayo: Uyilo olutsha lokuKhulisa ibhegi eFanelekileyo iSebenzisa imifuno etyaliweyo